Nei Resilient B2B Commerce Ndicho Chete Nzira Yekuenderera Kune Vagadziri Uye Vatengesi Post COVID-19 | Martech Zone
Iyo COVID-19 denda yakakanda makore ekusava nechokwadi munzvimbo yebhizinesi uye zvakakonzera kumiswa kwezviitiko zvakati zvehupfumi. Nekuda kweizvozvo, mabhizinesi anogona kupupurira paradigm shanduko mumaketani ekupa, mhando dzekushandisa, maitiro evatengi, uye nzira dzekutenga nekutengesa.
Izvo zvakakosha kutora matanho anoshanda kuisa bhizinesi rako munzvimbo yakachengeteka uye kumhanyisa maitiro ekudzosa. Kutsiga kwe bhizinesi kunogona kuenda nenzira yakareba mukugadzirisa kune zvisingafanoonekwe mamiriro uye kuona kusimudzira. Kunyanya kune vatambi vari muB2B yekutengesa cheni cheni, isina chokwadi nguva senge idzi dzinogona kuratidza a kati pamadziro mamiriro. Iwe unogona kusangana nekudonha mumusika kana kukuwana kwakaoma kusangana nekuwedzera kwekuda. Nepo mamiriro ese ari maviri achigona kushungurudza zvakaenzana, vagadziri nevanozvigovera vanogona kuvimba nekuenderera mberi kwebhizinesi rakasimba uye kushinga kupokana nedambudziko uye nekuona kusingavhiringidzike mune denda reiyi saizi uye chiyero.
Mamiriro azvino ezvinhu akamanikidza mabhizinesi kuti aite shanduko yemahara mune avo ekuenda-kumusika marongero. Heano mamwe akakosha ekutarisa nzvimbo ayo anogona kukubatsira iwe kuona kuenderera uye kuvaka yakashinga kumberi panguva yakaipisisa hutano hutano wezana ramakore.
Njodzi Yokudzoka - Mabhizinesi anofanirwa kufungidzira kukanganisa kwedenda pane kugona kuita. Sokupindura nekukurumidza, mazhinji mabhizinesi akagadza nzvimbo dzekutengesa tsinga nemapoka anoshanda-kuti aderedze kukanganisa kwehutachiona pamabasa ekutengesa. Ivo vakaitawo zvigadziriso senge anoshanduka echikwereti mazwi ekutsigira vavanoshanda navo chiteshi. Nepo zvirongwa izvi zvichizadzisa kusangana nezvinangwa nekukasira, kuronga nekungwarira uye kuita kwakakosha kuti uwanezve kwenguva refu.
Dhijitari-Yekutanga Nzira - B2B kutengesa kunogona kunge kuchinjika zvakanyanya mumashure-COVID-19 nguva nekutarisa kuchichinja kubva pasiri pamhepo kuenda kumadhimoni madhijitari. Iyo denda yakapa kukurumidza kune inoenderera nzira yekutengesa digitization. Sezvo mabhizimusi eB2B achifanoona kuwedzera kukuru kwekudyidzana kwedhijitari munguva pfupi iri kutevera, iwe unofanirwa kutarisa pane ese mabasa ekutengesa kuti uone mikana ingangoita yekushandisa kwema digital. Kuti uvandudze ruzivo rwe digital, ita shuwa kuti vatengi vanogona kuwana ruzivo rwakagadzirira pawebhusaiti, uye enzanisa zvigadzirwa nemasevhisi. Iwe unofanirwa zvakare kugadzirisa chero ehunyanzvi nyaya mune chaiyo-nguva uye tsvaga nzira nyowani uye itsva dzekuvandudza ruzivo rwevatengi.
Vatengesi Vanofungisisa Mutambo Wavo - Vatengesi vanopa yakavimbika uye yakasarudzika dhijitari ruzivo nekutarisa kuri kuwedzera kukurumidza, kujekesa, uye hunyanzvi zvinogona kupora nekukurumidza uye kukura kwavo vatengi base. Muchiitiko ichi, iwe unofanirwa kuwedzera tekinoroji uye kuunza maficha-ane hushamwari maficha senge ehupenyu chats dzinogona kubatsira kunzwisisa chaiko zvinodiwa uye nekupindura nekukurumidza. Pamusoro pekudyidzana pawebhusaiti, vatengesi vanotarisira kuwedzerwa traffic pane nharembozha uye nharaunda venhau nharaunda. Nekudaro, mune itsva yakajairwa, iwe unofanirwa kuita shanduko dzakakura mune yako nzira yekutengesa kuti ugone kushandisa zvakanyanya iwo mikana mune yechokwadi nzvimbo.
eCommerce uye Dhijitari Kudyidzana - Dambudziko razvino rinopa mukana wekuwedzera eCommerce yako uye kugona kwedhijitari. eCommerce inotarisirwa kutamba chikamu chakakosha mudanho rekudzora uye muchikamu chinotevera chekukura. Kana bhizinesi rako richishaya kugona kwedhijitari, unogona kurasikirwa nemikana isingaperi mumamiriro epamhepo. B2B mabhizinesi akatoisa mari pakuvaka eCommerce uye kudyidzana kwedhijitari anogona kutarisa kuti awane rutsoka rwakawandisa kuburikidza neasvikiro chaiwo.
Kutengesa Kure - Kuti kuderedze kukanganisa pakutengesa, mazhinji mabhizinesi eB2B akaona shanduko kune chaiyo yekutengesa modhi panguva yedenda. Iko kusimbiswa pakutengesa kure uye kubatanidza kuburikidza nevideoconferences, webinars, uye chatbots yakakura zvakanyanya. Nepo mamwe mabhizinesi achivimba zvizere nemasvikiro chaiwo kutsiva kutengesa munda, vamwe vanoshandisa avo vekutengesa nyanzvi tandem newebhu kutengesa. Mazhinji akawana nzira dziri kure kuva dzakaenzana kana kuti dzinoshanda zvakanyanya kusvika nekushumira vatengi. Nekudaro, kushandiswa kwenzira dziri kure kunogona kuwedzera kunyangwe zvirambidzo zvekufamba zvadzikiswa uye vanhu vodzokera kunzvimbo yavo yebasa.
Imwe nzira Sourcing - Kuvhiringidzika kwakanyanya muketeni yekupa zvinhu panguva yeCovid-19 kwakasimbisa kudiwa kwemabhizinesi kuti aite shanduko muhurongwa hwekutenga. Kuvhiringidzika mukutenga kwekutengesa kwakatadzisa kutsvagiswa kwezvinhu zvakasvibirira kubva kune vane kondirakiti vatengesi, kunyanya muzviitiko apo mbishi zvigadzirwa zvakawanikwa pasi rese. Kukunda dambudziko iri, mabhizinesi anoda kutarisa kune vatengesi vemuno kuti vawane zvekushandisa. Kuchengetedza zvibvumirano nevatengesi vemuno zvinogona kubatsira kudzivirira kunonoka mukugadzira nekuparadzira. Zvinogona zvakare kubatsira panguva ino kuona zvimwe zvigadzirwa uye zvigadzirwa.
Kuenderera mberi Kuronga uye Yakareba-Nguva Investment - Zvekutengesa kweB2B, ino inguva yakakodzera yekurera zvinotungamira uye nekuita mari dzekugara kwenguva refu. Tevedzera uye chengetedza kutaurirana kwese netarisiro mupombi uye sarudza mikana yenguva refu. Vazivise nezve hurongwa hwako hwezvakaitika uye nhanho dzauchazotora kuti uone kufambira mberi. Iwe zvishoma nezvishoma uchafanirwa kuchinjisa tarisiro yako kubva kumhinduro yechimbichimbi kuenda kune refu-refu modhi yekushinga kwekushanda. Mukuita uku, pinda mukuronga kwekuenderera kwakasimba kuti udzidze zvidzidzo kubva padambudziko razvino. Iwe unofanirwa zvakare kuongorora njodzi dzekuita pane akakosha mashandiro emabhizinesi uye kuitisa mamiriro ekuronga maitiro. Kuvandudza kugona kwesimba kunogona kubatsira kubata nezviitiko zvisati zvamboitika uye kudzokera kune yekutanga mamiriro ebhizinesi isina hushoma pane mashandiro.
Tsanangura iro Idzva Basa Rekutengesa Reps - Iko kuchinjisa kudigitalization hakukanganise basa revatengesi reps avo vava kudiwa kuti vazive zvishandiso zvemadhijitari senge Zoom, Skype, uye Webex. Vashandi vekutengesa vanoshanda munzvimbo yeBBB vanofanirwa kunzwisisa maturusi akasiyana epamhepo kubata uye nekupindura mibvunzo yevatengi zvinobudirira. Sezvo iwe uchigadzirira kuwedzera kwekutengesa kwedhijitari, nzwisisa nzira yakanakisa yekudzidzisa uye kuendesa vatengesi vekutengesa munzira dzakawanda kuti vape sevhisi uye rutsigiro. Kudzidziswa uye kuisa mari muvashandi vako vane chokwadi chekukohwa mibairo munguva refu.
Usamirire Kuti Denda Ripere
Nyanzvi dzinoti iyo coronavirus inogona kugara nesu kwenguva yakareba uye ichienderera ichipararira kudzamara jekiseni ragadzirwa kuti riibvise. Sezvo masangano anotarisa kuvaka patsva uye kutanga mashandiro avo nevashoma vashandi uye matanho anodiwa, zvakakosha kuenzanisa mashandiro ese nezvinodiwa zvitsva.
Mabhizinesi anofanirwa kutora nzira yekutungamira uye kutevera chirongwa chakamisikidzwa kuona kuenderera mberi mukushanda uye kudzivirira kukanganiswa kwekutengeswa. Chengetedza yakagadzirira kuverenga uye gadzirira zvisati zvaitika kuti usarasikirwe nemukana wekutengesa. Sezvo kudzoreredza kwehupfumi mumashure-COVID-19 nguva inogona kukurumidza kupfuura zvaitarisirwa, unofanirwa kushandisa ino nguva kugadzirira iko kudiwa-kwepent. Rangarira, kana usinga tange izvozvi, unogona kusakwanisa kushandisa mikana iri kubuda panguva yacho.
Tags: kumwe kutsvagab2b kutengeseranab2b ecommerceb2b kutengesakuenderera mberi kurongaCOVID-19kudyidzana kwedhijitaridigital-yekutanga nzirakupora kwenjodziecommerce kudyidzanakudzikiswa kwehupfumiInventorylogisticsyenguva refu yekudyaravagadziripandemickuporakutengesa kurevatengesi
Mushambadzi wedhijitari uye mushambadzi wekukura, Rajneesh Kumar parizvino ndiye mukuru wekushambadzira kwedhijitari kuPimcore Global Services. Pimcore mubairo-unokunda wakasimbiswa yakavhurika-sosi bhizinesi chikuva che master data manejimendi (PIM / MDM), mushandisi ruzivo manejimendi (CMS / UX), dijitari asset manejimendi (DAM), uye eCommerce.
Uchishandisa BlueOther's Proprietary AI Kuvhura Yakabatanidzwa Fitness Brand Insights